Ukuchithwa kwengcaciso - Iiglosari zeMethem
Funda oko kuthethwa yiChemistry
Ukuxhatshaza kubhekisela kwisicatshulwa esinamandla okubangela umonakalo ongenakucinganiswa okanye ukutshabalalisa enye into ngokuqhagamshelana. Into enokutsha iyakwazi ukuhlasela izinto ezahlukeneyo, kodwa eli gama lisetyenziswe kwiikhemikhali ezingabangela ukushisa kweekhemikhali xa zidibanisa nezicubu eziphilayo. Into echanekileyo ingaba yomeleleyo, i-liquid, okanye igesi.
Igama elithi "elibi" livela kwisenzi sesiLatini i- corrodere , oku kuthetha "ukugaya".
Kwiindawo eziphantsi, iikhemikhali ezonakalisayo zivakalayo.
Isimboli seengozi esisetyenzisiweyo ukuchonga ukuba ikhemikhali ekwazi ukutshabalalisa isinyithi okanye ukubola kwesikhumba kubonisa imichiza ethululelwe kwizinto eziphathekayo kunye nesandla, idla ngaphakathi.
Eyaziwayo Njengezi: Iimichiza ezichanekileyo nazo ziyakuthiwa "yi-caustic", nangona i-caustic yegama ihlala isebenza kwiziseko eziqinileyo kwaye azikho iicidi okanye i- oxidizers .
Imizekelo yezinto ezinobungozi
Ama-acids anamandla kunye neziseko ziqhelekile, nangona zikhona ezinye iicidi (umzekelo, i- carborane acids ) ezinamandla kakhulu, kodwa zingabonakali. I-acids ezibuthakathaka kunye neziseko zinobuhlungu xa zigxininiswe. Iiklasi zezinto ezinobungozi ziquka:
i-acids ezinamandla - Iimzekelo ziquka i-nitric acid, i-sulfuric acid kunye ne-hydrochloric acid
i-acids ebuthakathaka ingqalelo - Iimzekelo ziquka i-actic acetic acid kunye ne-acidic acid.
I-Lewis acids ezinamandla - Ezi ziquka i-boron trifluoride kunye ne-aluminium chloride
Iziseko ezisisiseko - Ezi zikwaziwa nangokuthi i-alkalis. Imizekelo ibandakanya i-potassium hydroxyde, i-sodium hydroxide kunye ne-calcium hydroxide.
izitye ze-alkali - Ezi zinyithi kunye ne-hydride ze- alkali kunye ne- alkaline komhlaba izitye zisebenza njengesiseko esomeleleyo. Imizekelo ibandakanya insimbi ye-sodium ne-potassium.
Iimpawu zokungcola - Iimzekelo ziquka i-calcium oxide kunye ne-phosphorus pentoxide.
i-oxidizers enamandla - Umzekelo omhle yi-hydrogen peroxide.
i-halogeni - Imizekelo ibandakanya i-fluor element kunye ne-chlorine. I i-halide ions ayibonakalisi, ngaphandle kwe-fluoride.
iimodi zemvelo - Umzekelo i-acetyl chloride.
i-alkylating agents - Umzekelo i-dimethyl sulfate.
ezithile zomzimba - Umzekelo ngu-phenol okanye i-carbolic acid.
Indlela yokuChatyelwa kwemisebenzi
Ngokuqhelekileyo iikhemikhali ezonakalisayo ezihlasela i-skin denins yamaprotheni okanye zenza i-amide hydrolysis okanye i-ester hydrolysis. Amide i-Amide i-hydrolysis yonakalisa iiprotheni, eziqulethe izibophelelo ze-amide. I-Lipids iqukethe izibopho ze-ester kwaye ihlaselwa yi-ester hydrolysis.
Ukongezelela, i-arhente evuthayo inokuthatha inxaxheba kwiimpendulo zamakhemikhali ezonakalisa isikhumba kunye / okanye ukuvelisa ukushisa. Ngokomzekelo, i-acid ye-sulfuric ididrate i-carbohydrate elukhumbeni kwaye ikhupha ubushushu, ngamanye amaxesha anele ukudala ukushisa okufudumeleyo ngaphezu kokutshisa imichiza.
Izinto ezihlaselayo ezihlasela ezinye izinto, ezifana nezitye, zingenza i-oxyidation ngokukhawuleza yomhlaba (umzekelo).
UkuKhathazeka ngokuKhuselekileyo kwezixhobo zokuCoca
Iimpahla zokukhusela zisetyenziselwa ukukhuselwa kwizinto zokulimaza. Izixhobo zingabandakanya iiglavu, iifowuni, izikhuselo zokukhusela, izihlangu ezikhuselekile, iziphefumli, izikhuselo zebuso kunye neenqwelo ze-asidi.
Iifayili kunye neekhemikhali ezonakalisayo kunye nexinzelelo eliphezulu lomphunga kufuneka zisetyenziswe ngaphakathi kwendawo yokuphuza umoya.
Kubalulekile ukuba izitya zokukhusela zisetyenziswe kusetyenziswa izinto ezinokukhangeka kwamakhemikhali aphezulu kwimichiza echaphazelayo. Akukho zixhobo ezikhuselayo ezikhusela kuzo zonke izinto eziyingozi! Ngokomzekelo, iiglavu zerabha ziyakulungeleka enye ikhemikhali, kodwa iyancipha enye. Kwakunjalo ne-nitrile, neoprene, ne-rubyber rubber.
Ukusetyenziswa kwezinto eziPheleleyo
Iimichiza ezinobungozi zihlala zihlambulula kakuhle. Ngenxa yokuba bathambekele ekusebenzeni kakhulu, i-corrosives ingasetyenziselwa ekusebenziseni i-catalytic okanye njenge-intermediate interactive kwi-chemical industry.
I-Zaitsev Rule Inkcazo
Umthetho wokuqala we-Thermodynamics Inkcazo
UJohn Schmidt, "uMnu 400"
Iiklasi zeGalofu zaBafazi: Yintoni oyaziyo, apho unokuthenga khona
Indlela yokwenza i-DNA Model usebenzisa i-Candy
Iindlebe ezide kunye ezimfutshane zeVotel
I-Kayaking Iimpahla zeebhasi ezomileyo ezikhoyo